Nasrallah oo ka hadlay weerarada ay is-weydaarsadeen Israel
Hoggaamiyaha kooxda Xizbullah ee dalka Lubnaan Sheekh Hassan Nasrallah ayaa Sabtidii sheegay in kooxdiisa ay dooratay inay duqeymaha Israel uga jawaato gantaallo lagu tuuray dhul banaan, balse ay ficilladooda kasii dari karaan mustaqbalka.
Lama soo werin wax duqeymaha oo dhacay Sabtidii, mana jiraan illaa hadda khasaare ka dhashay weerarada labada dhinac.
Jimcihii, Xizbullah ayaa gantaallo ku tuurtay dhanka ciidamada Israel, taasi oo dhalisay in Israel ay iyana weerarto Koonfurta Lubnaan. Labada dhinac ayaa gantaalladooda la beegsaday dhul banaan, taasi oo muujisay inaysan dooneyn inay xaaladda kasii daraan.
Khudbad uu jeediyey oo lagu maamuusayey dhammaadka dagaalkii 2006 ay la galeen Israel, ayaa Nasrallah wuxuu ku sheegay in duqeymaha Israel ay yihiin “halis cusub” oo aan la arkin 15-kii sano ee tegay.
Wuxuu sheegay in kooxda ay dooneysay inay muujiso in duqeyn kasta oo Israel ay fuliso looga jawaabayo “habka ugu habboon iyo qeyb qeyb.”
“Waxaan shalay dooranay dhul banaan oo ah aagga Beeraha Shebaa, si aan farriin u dirno, iyo inaan tallaabo qaadno, balse marka dambe waxaan qaadi karnaa tallaabo kasii daran,” ayuu yiri Nasrallah.
Gantaallada ay is-weydaarsanayaan labada dhinac ayaa billowday Arbacadii markii gantaallo laga soo tuuray Lubnaan ay ku dhaceen Israel, ayada oo aysan jirin cid sheegatay mas’uuliyadda. Weerarkaas, oo Xizbullah aysan ka hadlin, ayaa keenay in Israel ay jawaabto.
Xiisadda gobolka ayaa kacsaneyd wixii ka dambeeyey weerar lagu qaaday markab ay maamusho shirkad Israeli ah oo marayey meel u dhow xeebaha Cumaan, kaasi oo lagu eedeeyey Iran. Iran way beenisay inay ku lug laheyd weerarka.